» “अबको एमाले,को अध्यक्ष कुन? भिम रावल, वा केपि ओलि कमेन्ट, गर्नुहोस् !” “अबको एमाले,को अध्यक्ष कुन? भिम रावल, वा केपि ओलि कमेन्ट, गर्नुहोस् !” – हाम्रो खबर
हाम्रो खबर संबाद दाता 568 Views
“काठमाडौँ :नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको दशौं महाधिवेशनमा आफूले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिनसकेको बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर आफूप्रति आदर, सम्मान र स्नेहभाव देखाएको प्रतिक्रिया समेत दिए ।”
“मंगलबार सम्पादकहरुसँग,को अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले अलिबढि खटनु हुन्छ, थकाई लाग्छ, आराम गर्ने होकि भनेर उपाध्यक्ष रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर आफूलाई सम्मान गरेको र त्यसबाट आफू प्रभावित भएको पनि बताए । अध्यक्ष ओलीले आफू अध्यक्षमा नउठे हुन्थ्यो भन्ने बाहिरका केही मानिसहरुको सुझाव रहेको पनि बताए । उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा आउने कुरालाई आफूले नरोक्ने पनि स्पष्ट पारे ।”
“पार्टीको पदाधिकारी वा केन्द्रिय समितिमा आउनेहरुलाई आफूले आफूले कुनै दवाव र प्रभावमा नपार्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई थियो । उनले सर्वसम्मति वा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष वा महासचिवलाई आफूले सबैभन्दा बढी मन पराउने बताए । अध्यक्ष ओलीलाई तपाईले बढी मन पराएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव को भनि प्रश्न गरिएको थियो । त्यसको जवाफमा उनले सर्वसम्मती वा सबैभन्दा बढी मत लिएर निर्वाचित हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष वा महासचिवलाई आफूले सबैभन्दा बढी मन पराउने बताए ।”
“ओलीले पार्टीका नेताहरु,को व्यवस्थापनमा आफूले ध्यान नदिने बताए । देश र जनताको व्यवस्थापनमा आफूहरुको ध्यान जाने अध्यक्ष, ओलीको भनाइ थियो । उनले भने, ‘रावलजीले मलाई चुनौति दिनु भएको छैन । तपाईहरुले उहाँका शब्दप्रति, ध्यान दिनुस म प्रति आदर, सम्मान, माया स्नेह देखाउनु भएको छ । अलि बढी खटनु हुन्छ, थकाई लाग्छ, आराम गर्ने होकि, थकाई लाग्छ, त्यसो भए म उठछु । भन्नु भएको छ । होईन ? मैले पनि सुने । उहाँले कुनै चुनौति भन्नु भएको छैन ।”
“उहाँले सुझाव दिनु भएको छ । उहाँको स्नेहपूर्ण सुझावहरुबाट म प्रभावित छु । राम्रो कुरो हो । यो एकखालका मानिसहरुले निकै मन पराउने सुझाव पनि हो । यो सुझावचाँही मैले अध्यक्षमा नउठेर विश्राम लिए हुन्थ्यो भन्ने पार्टी बाहिरका मानिसहरुले पनि सुझाव छ । त्यो देखिन्छ तर रावलजीको त्यो होईन । उहाँले चाँही म प्रति अत्यन्त स्नेहभाव देखाउनु भएको छ । एउटा नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसमा कुनै प्रकारको जोरजुलुम मर्का वा दवाव हुँदैन ।”
“मेरो वि,रुद्ध म उठछु भन्छ कसैले,मैले उठन/नउठने टुंगो गरेको त छैन । मैले उठने टुंगो गरेभने मलाई निर्विरोध छोडन पनि पाइन्छ । मलाई चुनौति दिन पनि पाईन्छ मलाई कसैले चुनौति दिएमा त्यसलाई मैले स्वागत गर्छु । त्यसप्रति कुनै नराम्रो मान्नु हुँदैन र निर्विरोध हुन पाएको भए वा क्या एमाले, निर्विरोध भयो अध्यक्ष’ भन्ने चुनौति भयो भने चाँही भएन भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन । लोकतन्त्रमा चुनौति स्वभाविक कुरा हो । यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ ।”
“र म कसैलाई हुन्छ नि म यदि उठने, भएभने कसैलाई नउठे हुन्थ्यो पनि भन्दिन । म आफैं अध्यक्षमा भएको मान्छेले नउठ दिए हुन्थ्यो कुरा सामान्य शब्दमा आग्रह गर्दा पनि दवाव पर्न सक्छ । दवाव दिने मेरो कुनै मनसाय हुँदैन, छैन । त्यसकारण म कसैलाई दवाव महशुस हुने खालको कुनै व्यवहार,अभिव्यक्ति केही पनि गर्दिन । त्यसकारण मैले अहिलेसम्म उठन/नउठने निर्णय गरेको छैन । उठने भए भने अरुलाई नउठन पनि भन्दिन । खुसीको कुरा हो ।”